Sahaminta bacriminta dabiiciga ah rqalabka aw
Bacriminta kiimikada oo aad u tiro badan oo lagu dabaqo muddo dheer, maadada dabiiciga ah ee ku jirta ciidda ayaa yaraynaysa iyada oo aan laga takhalusin bacriminta dabiiciga ah.
Hadafka ugu weyn ee oqorshaha bacriminta rganict waa in la soo saaro bacrimin dabiici ah oo adeegsata qalab kala duwan oo ay ku jiraan arrimaha dabiiciga ah iyo nitrogen, fosfooraska iyo kalsiyamiska koritaanka dhirta. Kahor intaadan bilaabin warshad bacrimin dabiici ah, waxaad u baahan tahay inaad sameyso baaritaan ku saabsan suuqa alaabta ceyriinka ee deegaanka. Si loo sameeyo sahan lagu sameeyo macluumaadka loo baahan yahay ee loogu talagalay dhismaha warshadda, tusaale, nooca alaabta ceeriin, helitaanka iyo waddooyinka gaadiidka iyo qiimaha dhoofinta.
Waxa ugu muhiimsan ee lagu gaaro soo-saarista waarta ee bacriminta dabiiciga ah waa in la hubiyo keenista joogtada ah ee alaabta ceeriin ee dabiiciga ah. Sababtoo ah astaamaha mugga weyn iyo dhibaatada gaadiidka ee alaabta ceyriinka ah, waxay ka fiicneyd in la aasaaso warshadaada bacriminta dabiiciga ah meelaha ay ku filan tahay alaabta dabiiciga ah, sida agagaarka beero doofaarka weyn, digaagga iwm.
Gudaha wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah habka, waxaa jira alaabooyin badan oo dabiici ah oo caadi ah, Soo-saaraha ayaa sida caadiga ah doorta waxyaabaha ugu badan ee organic ka kooban sida waxyaabaha ugu muhiimsan ee ceeriin ah wuxuuna u isticmaalaa agab kale oo ceyriin ah oo dabiici ah ama waxyaabo dhexdhexaad ah oo NPK ah sida wax lagu daro, tusaale ahaan, warshad bacrimin dabiici ah oo laga aasaasay meel u dhow beer, waxaana jira wasakh badan oo beeraha ah sanadkasta. Soo-saarku wuxuu jeclaan lahaa inuu doorto cawska dalaggu u yahay alaabtiisa ceyriin ee ugu weyn, iyo digada xoolaha, peat iyo zeolite oo ah qalab ahaan.
Marka la soo koobo, qalabka dabiiciga ah, oo ay ku jiraan maadada dabiiciga ah iyo nafaqooyinka taas oo lagama maarmaanka u ah kor u qaadista koritaanka dalagyada, waxaa loo isticmaali karaa inay yihiin alaabta ceeriin ee habka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah. Tiknoolajiyada wax soo saarka ayaa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo alaabada ceeriin ee kala duwan.
Xulashada Warshadda Bacriminta Dabiiciga ah
Xulashada goobta ee warshad bacriminta dabiiciga ah waxay si dhow ula xiriirtaa kharashka wax soo saarka mustaqbalka iyo xiriirka maaraynta wax soo saarka. Waa inaad ugu horreyn tixgelisaa qodobbada soo socda.
1. Warshad bacriminta dabiiciga ah kama fogaan karto beerta. Digada digaagga iyo digada doofaarka waxaa lagu gartaa mug weyn, biyo badan iyo gaadiid aan ku habboonayn. Haddii ay aad uga fog tahay beerta, qiimaha gaadiidka ee alaabta ceyriinka ah way sii kordheysaa.
2. Meesha laga helo beertu aad ugama dhowaan karto kumana haboona jihada socodka sare ee shuruudaha beeraha. Haddii kale, waxay soo saari kartaa cudurrada faafa, xitaa waxay sababaan ka hortagga cudurrada faafa ee ay adag tahay in la beero.
3. Waa inay ka fogaataa aagga la deggan yahay ama aagga shaqada. In geeddi-socodka ama wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah, waxay soo saari doontaa qaar ka mid ah gaasaska dilaaga ah. Sidaa darteed, way fiicnaan lahayd in laga fogaado saamaynta nolosha dadka.
4. Waa inay ku taal meelaha fidsan, cilmiga dhulka, miiska biyaha oo hooseeya iyo hawo fiican. Intaas waxaa sii dheer, waa inay ka fogaataa meelaha u nugul bogagga, daadadka ama burburka.
5. Goobtu waa inay ahaato mid la jaanqaadaysa xaaladaha deegaanka iyo dhawrista dhulka. Si buuxda u isticmaal dhul bilaa camal ah ama dhul cidla ah oo aanad ku fadhiyin dhul beereed. U isticmaal meesha asalka ah ee aan la isticmaalin intii suurtagal ah, ka dibna waad yareyn kartaa maalgashiga.
6. Warshadda bacriminta ee organic waa doorbidaa afargeesle. Aagga Warshaddu waa inuu ahaadaa qiyaastii 10,000-20,000㎡.
7. Goobtu aad ugama fogaan karto xadhkaha korontada si loo yareeyo isticmaalka korontada iyo maalgashiga nidaamka korontada. Waa inuu u dhawaado biyaha si loo daboolo baahida biyaha ee wax soo saarka iyo nolosha.